Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Fulbaana 26,2017 | QEERROO
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Fulbaana 26,2017
Gogaa Saboota ollaa Oromiyaan Daheffatanii OromooIirratti Waraana Labsuun Dhaabbatuu qaba!
Fulbaana 26, 2017
Biyya impaayera Ethiopia keessatti sirni garboonfataa hidda gad jabeessee jiraatuun haaraa miti. Sirna garboonfataa abbaa Irree Wayyaanee waggoota 26’f ilmaan Oromoo fi saboota cunqurfanoo impaayera biyyatti haalmalee saamuun biyyattii irratti rakkoo hamaa geessisaa yoona gaheera. Yakkoota ilmaan Oromoo irraan gahaa turan keessaa hayyoota dhabamsiisuu, hidhuu, reebuu, Shamara Gudeeduu keessatti project hamaa hojjetaa turuun Wayyaanotaa beekaamadha. Haaluma kanaan oladeemaa Oromoo mooraa Yuunibarsiitiif manneen barnootaa irraa sektaroota mootummaa garaagaraaf hawwaasicha keessaa adamsanii qabanii lubbuun dhabamsiisuu irratti hojjetaniin lubbuu isaanii yoonaa gahatanii jiru. Keessattuu gocha mana hidhaa keessatti ilma namaa irraan gahaa turanif itti jiran yaadannoo sammuu namaa keessaa bilbiludha. Ilma namaa fannisanii guyyoota dheeraa dararuu, torch godhanii xiinsammuu isaa hadoochuuf yaaluu, limmoon quba namaa waraanaanii dhibee daddarboo kanneen akka HIV fii kabiroof saaxiluu, bakka namni hinargine geessanii bosona keessatti ajjeesuun al-awwaala gochuun maatii karaa eegsiisaa, biyya karaa ilaalchisaa hanbisaniiru. Kun keessattuu sabboontota akka Nadhii Gammadaa, Artist Jireenyaa, Hayyicha Dabbasaa Guyyoo fi oladeemtota barattoota Yuunibarsiitii Finfinnee Adaamaa, Wallaggaa, Madda Walaabuu, Haramayyaaf Jimma dabalatee Yuunibarsiitoota danuu keessaa dhabaman danuun yakka garajabummaa Wayyaaneen bakki buuteen isaanii dhabamee jiraachuun beekamaadha. Yakka kana yakkoota sammuu Oromoo umurii guutuu dararaa hanbisan yakkoota aarii hamaa keessatti nama hanbisan dalagaa turtee jirti. Keessattuu qote bultoota lafa irraa buqqaasuun duroomuu, qee’ee isaarraa buqqaasuun beenyaa gahaa tokko malee maatii karaarraas nu gootee jiraachuun beekamaadha. Har’as yakkoota sana fardeessitee jirti. Qabsaa’ota haqaa, Artistoota Oromoo fii Oromoo hedduu Oromummaasaaf yakkamuun manneen hidhaa keessatti dararamaa jiru.
Manni hidhaa ilmaan Oromoo fi sabootaa Cunqurfamoo impaayera biyyatti muraasaan guutuudha. Keessattuu manni hiraarsaa Wayyaanee mana hayyoota Oromooti jedhamuu danda’a. Yakkoota kana cinatti project hamaaf dhokataa maqaa naannoolee ollaa Oromoon daheeffattee Oromoo waraana jiraachuun ishee beekamaadha. Karaa Bahaan waraanni Oromoo irratti banamee jiru waraana Wayyaanee ta’us ragaan qabatamaa jiraachuun beekamaadha. Yakka kana Wayyaaneen akka nurraa dhaabduuf, keessattuu gogaa olloota Oromoo uffattee Oromoo barbadeessuun hatattamaan akka dhaabbatu Qeerroon bilisummaa Oromoo gad jabeessee dhaammata. Kanuma bu’uura godhachuun ibsoota qabxii akka 8’t qaban gadii kana akkanatti dhiiyeessa
1, Ilmaan Oromoo bakka kamirrayyuu jirtan, biyya kam keessas jirtan ilmaan Harmee keessan Oromiyaa Bahaaf Lixaa, Kaabaaf Kibbaa Wayyaaneen Waraana irratti banteef dirmannaa hatattamaa gochuun dirqii ta’uu beektanii awwaachuufii qabdu
2, Dhaabonni Oromoo fi jaarmiyaan Oromoof dhaabbattan kamiyyuu wal ta’uun diina dunuunfatee nutti dhufe kana dura dhaabbachuu qabdu
3, Hiriirri mormii “Gogaa ollaa Oromiyaa uffatanii Oromoo lafasaarra buqqisuun dhaabbatu qaba ” jedhu bakka jirru mara dhageessisuun addunyaaf ifoomsuu qabna
4, Oromoota daangaarraa buqqaa’aa jiraniif awwaatnoo obbolummaa taasisuun waajiba
5, Qeerroon Bilisummaa Oromoos gahee nurraa barbaadamu gama kamiinuu bahachuuf, diina keenya uummata keenyarraa qolachuuf bakka hundaa wal qopheessuun diina ofiitti Xumura gochuuf abbaluun amma, Irbuu waggaa waggaan kabaja ayyaana Irreechaa Bushooftuu irratti walii goonu baranas taasisuun bakka walargaa akkasiitti sagalee jajjabaa dhageessisuu
6, Qabsaa’ota karaa nagaa qabsaa’anii dararaamaa jiran Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee mana hidhaatii bahuu akka qaban sagalee dhageessisuu
7, Oromoo biyya Sumaalee keessatti lafa jalatti Oromummaa isaanii qofaaf hidhamanii jiran hatattamaan lakkisuu akka qaban gaafachuu
8, Tokkummaan kaanee diina ofii qoorba’uuf tattaafachuuu gama kamiiyyuu gochuun fuulleffaannaa keenya kallattii tokkorra kallattii qabsoo Wayyaanee dhabamsiisuu irratti fuulleffannii gochuun socho’uu
Kana waan ta’eef Oromoof qaamni Oromoof dubbatu kamuu akka irratti fuulleffatu gochuu akka qabnu dhaammanna. Oromoon daangaarraa haala ulfaataaf suukanneessaan du’aa jiru Oromummaasaa qofaaf dararaamaa waan jiruuf, yakkoonni akkanaa yakka duguuggaa sanyii akka ta’e beekuun Oromoon addunyaarra facaa’ee jiru dirmannaa akka nuuf gootan dhaammannaa